World's Most Admired Women of 2021
‘World’s Most Admired Women of 2021’ မှာ ပါဝင်ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Yang Mi နဲ့ Liu Yifei
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာ့အဆင့် ‘World’s Most Admired Man/Women’ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လေ့ရှိရာ ၂၀၂၁ အတွက် စာရင်းဝင် အ‌ယောက် (၂၀) စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါပြီ။ ‘World’s Most Admired Women of 2021’ ကို ရွေးချယ်ရမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံမှ အထင်ကရလူပေါင်း ၄၂၀၀၀ ဟာ စိစစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ “ပရိသတ်တွေရဲ့ စံပြဖြစ် မြတ်နိုးခံရမှုနဲ့ မီဒီယာတွေကို လွှမ်းမိုးမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သူ” ဆိုပြီး အချက် (၂) ချက်ကို မူတည်က စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
‘World’s Most Admired Women of 2021’ မှာတော့ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဒီနှစ်အတွက် အယောက် (၂၀) စာရင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်အဖြစ် Yang Mi နဲ့ Liu Yifei တို့က ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ အမေရိကန် – တရုတ်နိုင်ငံသူ Liu Yifei က အဆင့် (၁၈) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး ထိပ်တန်းတရုတ်မင်းသမီး Yang Mi ဟာ အဆင့် (၁၉) ကနေ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
World's Most Admired Women 2021 (1-10)
5. Scarlett Johansson 🇺🇸
7. Taylor Swift 🇺🇸
8. Angela Merkel 🇩🇪
9. Malala Yousafzai 🇵🇰
10. Priyanka Chopra 🇮🇳https://t.co/oBV8X1gh6E pic.twitter.com/s3lP0ZNBBc
အဆင့် (၁) နေရာမှာတော့ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကတော် Michelle Obama က ဦးဆောင်နေပါတယ်။ Liu Yifei နဲ့ Yang Mi ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ ပရိသတ်ဆွဲဆောင်အားအကောင်းဆုံး မင်းသမီး (၂) ဦးအတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်။
Previous post Vivo S series ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အတွက် spokesperson အဖြစ် ထပ်မံခန့်အပ်ခံခဲ့ရပြန်တဲ့ Lisa
Next post ဟတ်ကာ တွေကြောင့် ချစ်သူနဲ့ပုံတွေ ဖြန့်ခံရတဲ့ Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Joy အပေါ် K Netizen တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှု